Somalis For Jesus: "SHAHIIDKA SOOMAALIYEED"
(A SOMALI MARTYR)
Shahiidnimadu waa darajo qof kasta oo muslim ahi jecelyahay inuu hanto hase yeeshee dhabaha loo marayo lagu kala geddisanyahay.
Meelaha maanta dhibaatooyinku ka jiraan ee muslimiinta lagu gumaysto ayaa dad badani u arkaan janno dagatay iyo fursado shahiidnimo lagu kasban karo.
1982 isagoo xilligaa da'diisu ahayd 16 jir ayaa wuxuu akhristay buug lagu magacaabo Riyooyin(dreams) oo uu qoray Sigmund Freud kaasoo khalkhal iyo hurdo la'aan ku dhaliyay.
Sheekh loo geeyo iyo quraan lagu akhriyo midna waxba ka tari waaye.
Qof kristaan ah ayaa wuxuu ugu deeqay kitaabka injiilka, waxaanu kula taliyay inuu akhristo.
Liibaan wuxuu noqday mid ay raali galin weyday muslinimadu sababo badan darteed.
Waxaa ka yaabisay sababta loogu tukado afka qalaad ee carabiga isla markaana loogu jeesto dhinaca maka.
Ugu dambaystii 1985 ayuu go'aansaday in kitaabka dhabta ahi yahay injiilka ee uusan ahayn quraanka.
Liibaan saaxiibadii waxay dareemeen isbedelka ku dhacay wuxuuna uga waramay caqiidadiisa cusub.
Markii uu sheekhii bogsaday waxa uu Liibaan kula taliyay inuu dhagaysto idaacadda af Soomaaliga ku baxda ee laga faafiyo diinta masiixiga.
Ka dib sheekhii ayaa la xiriiray idaacaddaas kana codsaday qoraalo ka hadlaya kiristaanka iyo casharo aqoon dirsad ah.
Sheekhaasi waxa uu ka mid ahaa dad badan oo uu noloshooda saamayn ku yeeshay Liibaan.
Waxa uu ku dhiiri galin jiray dadka inay bartaan diinta masiixiga kuwana waabay qaateen.
Hadaba sheekadan oo aan ka soo qaatay intii ugu muhiimsanayd ayaa haddii ay u jirto sida ay gaaladu sheegayso waxay inoo caddaynaysaa in hawsha kiristaamaynta ee ka socota Soomaaliya ay ka weyn tahay caruur hadiyado masiixiyadda ku lug lah loo qaybiyo.
[Akhri: Ka hortagga ololaha Kirishtaamaynta]
Hadaba ninkaas oo aad ula yaaban ujeedooyinka qarsoon ee hay'adahaas qaarkood siiba dhinaca faafinta kiristaanka ayaa wuxuu weydiiyay mid ka mid ahaa gaalada hay'dahaas u shaqeeya sababta ay diinta kiristaanka ugu faaafinayaan dadkan muslimiinta ah.
Jawaabtii la siiyay ayaa waxay ahayd sidee baa caqligayagu noo siin karaa inaanu dadkan ka badbaadino gaajo uguna ogolaano inay ku dhacaan dabka naarta!
Ismail A. Hassan (khaliil)Khalka1@aol.com
Source: www.somalitalk.com May 9, 2004. (January 17, 2005).
Posted by Somalis For Jesus .SFJ at 6:22 AM